Qoys Soomaaliyeed Oo Ku Cusub Mid Kamid Ah Wadamada Yurub Oo Laga Qaatay Afar Caruur Ah Aay Dhaleen | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: March 16, 2014, 10:29 am
Qoys Soomaaliyeed oo kunool Dalka Norwey ayaa si xoog ah waxaa looga qaatay afar Caruur ah oo ay dhaleen, kadib markii lagu eedeeyay in ay dayaceen Wiil Sadax Sano jir ah oo qoyskaasi dhaleen oo geeriyooday.
Qoyskan Soomaaliyeed ee mashaqada soo wajahday ayaa la sheegay in ay ku cusbaayeen Dalka Norwey , waxa ayna kunoolaayeen magaalo yar oo ku taal waqooyiga dalka Norway.
Hey’adda Bad baadada caruurta Dalka Norway ayaa si xoog ah uga qaadatay Qoyskan Soomaaliyeed afarta Caruurta ah ay dhaleen , Hay’ada ayaana mar marsiiyo uga dhigatay Caruurta ay la wareegeen in Qoyskan dayaceen Wiil yar oo Sadax Sano jir ah oo geeriyoodayXili uu caruurta kale ee la dhalatay uu la ciyaarayay.
Waalidiinta dhalay Caruurta ay Qaadatay Dowlada Norwey ayaa aad uga murugeesan Mustaqbalka Caruurtooda , waxaana la sheegay in Reerkan ay ahaayeen kuwa ku wanaagsan Daryeelka Caruurtooda balse Qadartu ku timid cunugooda yar.
Waalidiin Badan oo Soomaaliyeed ayaa wadamo kuyaala Qaarada Yurub looga qaatay caruurtooda kadib makii lagu eedeeyay in caruurtooda dayaceen ama dhibaato ay u geesteen.